အလုံက မန္တလေးအစားအစာကောင်းတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင် "မန်းမုန့်တီတော်တော်ကောင်းကောင်း"[Review,Photos]
အလုံက မန္တလေးအစားအစာကောင်းတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင် “မန်းမုန့်တီတော်တော်ကောင်းကောင်း” [Review,Photos]
14 Nov 2017 . 11:37 AM
အလုံက မန္တလေးအစားအစာကောင်းတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်
ဆိုင်အပြင်အဆင်က အဲကွန်းနဲ့ အလုံပိတ်ခန်း။ အေးဆေးစားလို့ အဆင်ပြေတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆိုင်အနည်းငယ် ကျဉ်းတယ်။ ဆိုင်ရဲ့နေရာက လူသူသိပ်မသိဆဲ့ အတွင်းဘက် ကျတယ်။ ကားရပ်ရတာ အဆင်မပြေတဲ့ လမ်းဆုံ လမ်းခွမှာ ရှိတယ်။ နံရံမှာ မန်းလေး နန်းတော်ရာ ပုံတွေ ကျုံး၊ မြို့ရိုးတွေပုံ ဗီနိုင်းလေးတွေ အစီအရီဆွဲထားတယ်။ မီနူးကို စာချွန်လွှာပုံစံ ပလပ်စတစ်ကဒ်ကလေးနဲ့ ပြုလုပ်ထားတယ်။
ဈေးနှုန်းများ နှင့် လိပ်စာကဒ်
ဒီဆိုင်မှာ ဘာတွေ ရလဲ?
-အုန်းထမင်း (ကြက်၊ ဆိတ်)
အညာအသုပ်စုံ ကိုမှ ထူးထူးဆန်းဆန်းအရွက် မျိုးစုံနဲ့ ရသဗျ။
(အသုပ်တွေ ရတာ ရေးပြတာ မစားခဲ့ရသေးဘူး)
ကိုယ်သွားစားခဲ့တာ မနက် ၉ နာရီတော့ ရှိပြီဗျ။ ဆိုင်က ဝန်ထမ်းကောင်လေးက ပုဆိုးနဲ့ အင်္ကျီအဖြူ ခေါင်းက စားဖိုဆောင်တွေမှာ ဝတ်တဲ့ ခေါင်းစွပ်နဲ့ တံခါးလာဖွင့်ပေးတယ်။ အထဲက အဲကွန်းနဲ့ အေးတယ်။ဒါပေမယ့် မြန်မာအစားအစာဆိုင်မို့ အနံ့က မလတ်ဆတ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ နှစ်ယောက်ဆိုတော့ မုန့်တီ (နန်းကြီး) နဲ့ တစ်ပွဲ၊ မြှီးရှည် တစ်ပွဲ၊ ကြာဇံချက်တစ်ပွဲနဲ့ မတ်ပဲကြော်တစ်ပွဲ မှာလိုက်တယ်။ အခြား အသုပါတွေက နေ့လည်မှ စားလို့ပြေမှာမို့ မမှာလိုက်တော့ဘူး။
မုန့်တီ – ⭐️⭐️⭐️⭐️
ကြယ်ငါးလုံးမှာ လေးလုံးပေးသင့်တဲ့ မုန့်တီပါ။ နန်းကြီးကိုယ့်အကြိုက် ပဲမှုန့်စေးစေးလေး သုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ကြက်သားနဲ့ ငါးဖယ် အရောပါ။ ငါးဖယ်ကို အချောင်းရှည်လှီးထားတယ်။ ကြက်သားမျှင်ကြီးတယ်။ ခေါက်ဆွဲကြွပ်ကြော်၊ ပဲပင်ပေါက်၊ နံနံပင် ပါတယ်။ ဘေးက အချဉ်က ကြက်သွန်ကွင်းစိတ်နဲ့ သံပရာသီး။ အရသာပိုင်း လက်ရာ အရမ်းကောင်း။ မန္တလေးလက်ရာမှီတယ်။ လုံးဝ သွားစားသင့်တဲ့ မုန့်တီပါ။ ဟင်းရည် အားမရဘူး။
မြှီးရှည် – ⭐️⭐️
အားမရဘူး။ အကြိုက်ဆုံးက အလုံက ရွှေနန်းတော်နဲ့ ရန်ကင်းက နန်းတော်ရှေ့။ ဒါပေမယ့် မြှီးရှည်အတွက် ပဲပုတ်စေ့အချိုတစ်ခွက်၊ မုန့်ညှင်းချဉ်တစ်ခွက်၊ ပေးပါတယ။် ခုနကပြောသလို ဟင်းရည်အားမရ။ မြှီးရှည်ထဲ ဂျုံလုံးကြော်ကိုက်ထည့်ထားတယ်။ ဝက်မြှီးရှည်ဆိုတော အဆီအခေါက်အနည်းငယ်ပါမယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်း ကြွက်နားရွက် ပါမယ်။ စားလို့ကောင်းတယ်။ အရမ်းအကောင်းဆုံးဆိုင်တွေ တွေ့ထားတော့ ဒါက ပုံမှန်အရသာပဲ။ စားကြည့်သင့်ပါတယ်။
မန္တလေးကြာဇံချက် – ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
ကြယ်ငါးလုံးပေးရတာ အရမ်းကောင်းလို့ဗျ။ ပျစ်မနေ ကျဲမနေဘူး။ ပူပူလေးနဲ့ အစုံပါတယ်။ ကြက်သားလည်း များတယ်။ အထဲပါ ပါသင့်တဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းစုံလင်တယ်။ အရသာက ပူပူလေးနဲ့ကောင်းတယ်လို့ ပြောရမယ်။ ဒီအရသာလေး သောက်ပြီး မန္တလေး အိမ်မှာ အမြဲလုပ်စားဖြစ်တဲ့ ကြာဇံချက် အိုးကြီးကို လွမ်းမိတယ်။
မတ်ပဲကြော် – ⭐️⭐️⭐️
စားလို့ကောင်းတယ်။ ရွရွလေး။ဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့ ဆီစစ်ထားတယ်။ မပူဘူး။ ပြီးတော့ မတ်ပဲ ကို ကြိတ်ထားတာ ကျစ်တယ်။ အကြော်က အနည်းငယ် အသားကျစ်လို့ ပွပွလေးဆို ဒီထပ် ပိုကောင်းမှာ။ မန္တလေးစတိုင် မန်းကျည်းချဉ်နဲ့ ပေးတယ်ဗျ။
-တစ်ပွဲ တစ်ပွဲ အတော်များတယ်။
-ဆိုင်က မြန်မာဆိုင်မို့ အဲကွန်းခန်းထဲမှာ သိပ် Fresh မဖြစ်ဘူး။
⏰ဆိုင်ဖွင့်ချိန် – မနက် ၆ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီ အထိ
☎️09 45330 2414
?အမှတ် (၉၃)၊ ငုဝါလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Google Map : https://goo.gl/maps/mghpmdtpwLJ2
ဆိုင်ရဲ့ ရရှိသော Menu (ဈေးနှုန်းအပါအဝင်)နှင့် ဆိုင်လိပ်စာကဒ်အား ပုံတွင် ကြည့်ရှု့ပါ။ Akhayar – Food ကို အမြဲ See First လုပ်ထားတဲ့သူတွေ အတွက် ထူးထူးဆန်းဆန်း စားကောင်းတဲ့ ဆိုင်များကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးမှာပါ။ ☺️
အလုံက မန်တလေးအစားအစာကောငျးတဲ့ ဆိုငျတဈဆိုငျ
ဆိုငျအပွငျအဆငျက အဲကှနျးနဲ့ အလုံပိတျခနျး။ အေးဆေးစားလို့ အဆငျပွတေယျ။ ဒါပမေယျ့ ဆိုငျအနညျးငယျ ကဉျြးတယျ။ ဆိုငျရဲ့နရောက လူသူသိပျမသိဆဲ့ အတှငျးဘကျ ကတြယျ။ ကားရပျရတာ အဆငျမပွတေဲ့ လမျးဆုံ လမျးခှမှာ ရှိတယျ။ နံရံမှာ မနျးလေး နနျးတျောရာ ပုံတှေ ကြုံး၊ မွို့ရိုးတှပေုံ ဗီနိုငျးလေးတှေ အစီအရီဆှဲထားတယျ။ မီနူးကို စာခြှနျလှာပုံစံ ပလပျစတဈကဒျကလေးနဲ့ ပွုလုပျထားတယျ။
ဈေးနှုနျးမြား နှငျ့ လိပျစာကဒျ
ဒီဆိုငျမှာ ဘာတှေ ရလဲ?
-အုနျးထမငျး (ကွကျ၊ ဆိတျ)
အညာအသုပျစုံ ကိုမှ ထူးထူးဆနျးဆနျးအရှကျ မြိုးစုံနဲ့ ရသဗြ။
(အသုပျတှေ ရတာ ရေးပွတာ မစားခဲ့ရသေးဘူး)
ကိုယျသှားစားခဲ့တာ မနကျ ၉ နာရီတော့ ရှိပွီဗြ။ ဆိုငျက ဝနျထမျးကောငျလေးက ပုဆိုးနဲ့ အကငြ်္ီအဖွူ ခေါငျးက စားဖိုဆောငျတှမှော ဝတျတဲ့ ခေါငျးစှပျနဲ့ တံခါးလာဖှငျ့ပေးတယျ။ အထဲက အဲကှနျးနဲ့ အေးတယျ။ဒါပမေယျ့ မွနျမာအစားအစာဆိုငျမို့ အနံ့က မလတျဆတျဘူး ဖွဈနတေယျ။ နှဈယောကျဆိုတော့ မုနျ့တီ (နနျးကွီး) နဲ့ တဈပှဲ၊ မွှီးရှညျ တဈပှဲ၊ ကွာဇံခကျြတဈပှဲနဲ့ မတျပဲကွျောတဈပှဲ မှာလိုကျတယျ။ အခွား အသုပါတှကေ နလေ့ညျမှ စားလို့ပွမှောမို့ မမှာလိုကျတော့ဘူး။
မုနျ့တီ – ⭐️⭐️⭐️⭐️
ကွယျငါးလုံးမှာ လေးလုံးပေးသငျ့တဲ့ မုနျ့တီပါ။ နနျးကွီးကိုယျ့အကွိုကျ ပဲမှုနျ့စေးစေးလေး သုပျခိုငျးလိုကျတယျ။ ကွကျသားနဲ့ ငါးဖယျ အရောပါ။ ငါးဖယျကို အခြောငျးရှညျလှီးထားတယျ။ ကွကျသားမြှငျကွီးတယျ။ ခေါကျဆှဲကွှပျကွျော၊ ပဲပငျပေါကျ၊ နံနံပငျ ပါတယျ။ ဘေးက အခဉျြက ကွကျသှနျကှငျးစိတျနဲ့ သံပရာသီး။ အရသာပိုငျး လကျရာ အရမျးကောငျး။ မန်တလေးလကျရာမှီတယျ။ လုံးဝ သှားစားသငျ့တဲ့ မုနျ့တီပါ။ ဟငျးရညျ အားမရဘူး။
မွှီးရှညျ – ⭐️⭐️
အားမရဘူး။ အကွိုကျဆုံးက အလုံက ရှနေနျးတျောနဲ့ ရနျကငျးက နနျးတျောရှေ့။ ဒါပမေယျ့ မွှီးရှညျအတှကျ ပဲပုတျစအေ့ခြိုတဈခှကျ၊ မုနျ့ညှငျးခဉျြတဈခှကျ၊ ပေးပါတယ။ျ ခုနကပွောသလို ဟငျးရညျအားမရ။ မွှီးရှညျထဲ ဂြုံလုံးကွျောကိုကျထညျ့ထားတယျ။ ဝကျမွှီးရှညျဆိုတော အဆီအခေါကျအနညျးငယျပါမယျ။ ထူးထူးဆနျးဆနျး ကွှကျနားရှကျ ပါမယျ။ စားလို့ကောငျးတယျ။ အရမျးအကောငျးဆုံးဆိုငျတှေ တှထေ့ားတော့ ဒါက ပုံမှနျအရသာပဲ။ စားကွညျ့သငျ့ပါတယျ။
မန်တလေးကွာဇံခကျြ – ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
ကွယျငါးလုံးပေးရတာ အရမျးကောငျးလို့ဗြ။ ပဈြမနေ ကြဲမနဘေူး။ ပူပူလေးနဲ့ အစုံပါတယျ။ ကွကျသားလညျး မြားတယျ။ အထဲပါ ပါသငျ့တဲ့ ပါဝငျပစ်စညျးစုံလငျတယျ။ အရသာက ပူပူလေးနဲ့ကောငျးတယျလို့ ပွောရမယျ။ ဒီအရသာလေး သောကျပွီး မန်တလေး အိမျမှာ အမွဲလုပျစားဖွဈတဲ့ ကွာဇံခကျြ အိုးကွီးကို လှမျးမိတယျ။
မတျပဲကွျော – ⭐️⭐️⭐️
စားလို့ကောငျးတယျ။ ရှရှလေး။ဖောငျးဖောငျးလေးနဲ့ ဆီစဈထားတယျ။ မပူဘူး။ ပွီးတော့ မတျပဲ ကို ကွိတျထားတာ ကဈြတယျ။ အကွျောက အနညျးငယျ အသားကဈြလို့ ပှပှလေးဆို ဒီထပျ ပိုကောငျးမှာ။ မန်တလေးစတိုငျ မနျးကညျြးခဉျြနဲ့ ပေးတယျဗြ။
-တဈပှဲ တဈပှဲ အတျောမြားတယျ။
-ဆိုငျက မွနျမာဆိုငျမို့ အဲကှနျးခနျးထဲမှာ သိပျ Fresh မဖွဈဘူး။
⏰ဆိုငျဖှငျ့ခြိနျ – မနကျ ၆ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီ အထိ
?အမှတျ (၉၃)၊ ငုဝါလမျး၊ အလုံမွို့နယျ၊ ရနျကုနျမွို့။
ဆိုငျရဲ့ ရရှိသော Menu (ဈေးနှုနျးအပါအဝငျ)နှငျ့ ဆိုငျလိပျစာကဒျအား ပုံတှငျ ကွညျ့ရှု့ပါ။ Akhayar – Food ကို အမွဲ See First လုပျထားတဲ့သူတှေ အတှကျ ထူးထူးဆနျးဆနျး စားကောငျးတဲ့ ဆိုငျမြားကို ဆကျလကျဖျောပွပေးမှာပါ။ ☺️
by Ei Ei . 14 hours ago